Ma awoodi doontaa inaad Ilaah hortiisa istaagto maalinta xukunka? Waa xukunka kuwa nool iyo kuwa dhintayba wuxuuna xiriir dhow la leeyahay sarakicidda. Masiixiyiinta qaar baa ka baqa dhacdadan. Waxaa jira sabab aan uga cabsan karno, maxaa yeelay kulligeen waan dembaabnaa: "Dhammaantood waa dembilayaal, oo waxay waayeen ammaanta ay ku lahaan karaan Ilaah hortiis" (Rooma 3,23).
Immisa jeer ayaad dembaabtaa? Mararka qaarkood? Maalin walba? Binu-aadamku waa isku dembi, dembiguna wuxuu keenaa dhimasho. Hase yeeshe, qof kasta oo jirrabaadda waxaa lagu kiciyaa oo ku hanuuniyaa rabitaankiisa. Taas dabadeed, markii damacu helo, wuxuu dhalaa dembi; Dembigu, goortuu dhammeeyo, miyuu dhintaa » (Yacquub 1,15).
Markaa miyaad istaagi kartaa Ilaah hortiisa oo aad uga sheekeyn kartaa dhammaan waxyaalaha wanaagsan ee aad noloshaada ku soo qabatay? Sidee muhiim u ahayd bulshada dhexdeeda, intee le'eg adeegga bulshada ayaad qabatay? Sidee ayaad u aqoonsan tahay Maya - kuwan midkoodna kuma heli doono inaad gasho boqortooyada Ilaah, maxaa yeelay weli waxaad tahay dambiile oo Ilaahna dembiga kuma dhex noolaan karo. Ha baqina, idoyahow yari! Maxaa yeelay, waxay ku farxday aabbahaa inuu ku siiyo boqortooyada » (Luukos 12,32). Kaliya Ilaah qudhiisa ee Masiixa ayaa xalliyay dhibaatadan caalamiga ah ee aadanaha. Ciise dembiyadeenna oo dhan kor buu u qaaday markuu inoo dhintay. Sidii Eebbe iyo nin ahaan, allabari keliya ayaa dabooli kara oo tirtiri kara dhammaan dembiyada aadanaha - weligiis iyo qof kasta oo isaga u aqbala inuu Badbaadiyaha noqdo.
Maalinta xukunka waxaad Ilaah hortiisa ku istaagi doontaa Ruuxa Quduuska ah ee Masiixa ku jira. Sababtaas darteed iyo sababtan oo keliya ayaa Ilaaha ah Aabbihiin wuxuu farxad iyo ifinba siin doonaa adiga iyo inta ku jirta Masiixa boqortooyadiisa weligeed ah oo leh wehelnimada Ilaaha ah.
Waxaa qoray Clifford Marsh